Ultimate SARMs Ntuziaka Maka 2021 | Mlọ ahịa SARMs UK
SARMs 101: Ntuziaka SARM kachasị
Anyị achịkọtara ihe niile ịchọrọ ịma gbasara SARMS. Na ntuziaka SARM a, ị ga-aghọta ihe SARM bụ, iwu na nchekwa nke SARM, ma ọ bụrụ na SARM nwere mmetụta dị iche iche. Anyị na-ekpuchikwa SARM kachasị mma maka ndị mbido, SARM kachasị mma maka ịcha, ebe ịzụta SARM, na ndị ọzọ.
Gụọ maka ntuziaka SARM zuru ezu.
Nhọrọ Androgen Receptor Modulators, ma ọ bụ SARM, bụ ụdị ọgwụgwọ na-agwọ ọrịa. A na-akọ na SARM nwere ụdị mmetụta dịka androgenic ọgwụ (dị ka steroid). Agbanyeghị, ha kwesiri ịhọrọ nhọrọ karịa n'ihe ha na-eme. 'Nhọrọ ha' bụ kpọmkwem ihe mere eji ewere ha dị ka ndị na-enyere aka, ndị dị mma iji ma bụrụ ndị ama ama.
Ebu ụzọ mepụtara SARM iji nyere aka na-emeso ọnọdụ ndị dị ka oke ibu, ọkpụkpụ, na ahụ ike na-akpata nká na ọrịa (dịka ọrịa kansa). Ma, na nso nso a, ndị na-eme egwuregwu na ndị na-eme egwuregwu ahụ nabatara SARM. A na-ahụta ha dị nchebe maka ojiji karịa steroid ma kọọrọ ha ka ha mepụta obere obere na enweghị mmetụta ọ bụla.
Kedu ihe dị iche n'etiti SARM na Peptides?
Iji ghọta ihe dị iche na SARM na peptides, ọ dị mkpa ka anyị buru ụzọ ghọta ihe peptides bụ.
Gịnị bụ peptides?
Peptides bụ otu ụdị ụdị mgbakwunye nke nwere ihe na-erughị 50 amino acid. Peptides na-emekwa ka mmetụta dị ole na ole karịa steroid (yiri nke SARM) ma ọ nweghị mmetụta anabolic kpọmkwem. A na-eji ha iji mee ka mmiri nke hormone nke na-eto eto dịkwuo elu.
Myirịta dị n'etiti SARM na peptides
SARM na peptides abụọ maara na ha nwere mmetụta dị ole na ole karịa ndị steroid
Ha abụọ bụ iwu ịzụta n'okpuru ọnọdụ ụfọdụ
Ha abụọ bụ ụdị ndị na-arụ ọrụ ahụ ike
Onye ọ bụla nwere mmetụta na-apụtachaghị ìhè na-emetụta akwara na ọkpụkpụ
Esemokwu dị n'etiti SARM na peptides
SARM bụ ihe sịntetik, ebe peptides nwere ike ịbụ nke eke ma ọ bụ nke sịntetik
SARM bụ ụdị androgen ligand-receptor ebe polypeptides yinye na amino acid erughị 50
SARM na-ejikọta onye na-enweta etrogen na akwara na ọkpụkpụ ka ọ bawanye uto ha ebe Peptides na-amụba ntọhapụ nke hormone uto
Ndị SARM na-emepụta mmetụta dị oke mma na ọkpụkpụ na akwara ụlọ mgbe nhọrọ nke peptides dị ntakịrị
Ndi SARM nwere nchekwa?
Ọ dị mkpa mgbe ị na-atụle ojiji nke SARM iji ịkpachara anya. A naghị achịkwa ụlọ ọrụ SARM ugbu a, ya mere enwere ọtụtụ ngwaahịa dị ala (na ọbụna adịgboroja) n'ebe ahụ n'ahịa.
E nwere ọtụtụ SARM dịnụ, ụfọdụ na-ahụta dị nchebe karịa ndị ọzọ. Maka ugbu a, nnyocha sayensị na akụkọ onwe onye emeela ka ha chebe karịa steroid ndị anabolic.
Gbaa mbọ hụ na ị na-azụ SARM site n'aka onye na-ere ahịa ziri ezi nke nwere nkwenye ndị ọzọ, yabụ na ị maara na ị na-azụ ezigbo SARM. Nchịkọta anyị dị mma ma rụọ ya na UK na ngwaahịa ọgwụ. Ị nwere ike nyochaa nchịkọta anyị ebe a.
Ndi SARM Bụ Iwu?
Na UK ire ere SARM bụ nke iwu. Agbanyeghị, etu esi ere SARM amachibidoro dabere na ebumnuche ndị nrụpụtara, ndị na-ere ere, na onye zụrụ ya.
Kedu ka SARM si arụ ọrụ?
Ndị SARM na-arụ ọrụ yiri nke anabolic steroid, ọ bụ ya mere ha ji ewere ha dị ka ihe ọzọ na steroid, yana iweda njirimara androgenic.
Ndị SARM na-akpali kpọmkwem ndị na-anabata etrogen na akwara na ọkpụkpụ sel ⁠ — na-eme ka uto na-eto ngwa ngwa ma nwee mmetụta dị ntakịrị na mkpụrụ ndụ ndị ọzọ n’ahụ (n’adịghị ka ndị steroid). Ha “na - ahọrọ” naanị ụfọdụ akwara na ọkpụkpụ, na-ahapụ akụkụ ndị ọzọ dịka imeju, prostate, na ụbụrụ emetụbeghị.
Kedu ka SARM si arụ ọrụ? Ha Na-arụ Ọrụ?
A maara SARM dị ka ndị dị nwayọọ, mana ha na-arụ ọrụ nke ọma. Nsonaazụ ziri ezi ewepụtara dabere na ụdị SARM ewere. Dịka ọmụmaatụ, a na-ewere Ostarine dị ka otu n'ime SARM kachasị mma ịmalite ịmalite.
Irè nke SARM dabere na ebumnuche ahụike. Ọ bụrụ na ihe mgbaru ọsọ ga-esure abụba ma wuo ahụ ike, SARM dị ka Ostarine dị irè na-enyere ndị ọrụ aka inweta site na 4 ruo 10 pound na mkpokọta izu 12.
Ndi SARM Nwere Mmetụta?
Mmetụta mmetụta ndị a kọrọ banyere SARM dị ntakịrị na ọ nweghị. Imirikiti SARM, Ostarine gụnyere, abụghị nke methylated ya mere ọ gaghị emetụta imeju.
Offọdụ n'ime mmetụta ndị a kọrọ abụwo ike ọgwụgwụ na ike ọgwụgwụ, ọ bụ ezie na a na-ekwu na n'okpuru usoro ọgwụgwọ a tụrụ aro, ohere nke inwe mmetụta ndị a dị nnọọ ala.
Eziokwu bụ n'ihi na SARM dị ọhụrụ, nchọpụta enwebeghị ike igosipụta mmetụta dị ogologo oge nke iji SARM, ọ bụ ezie na e kere ha na mbụ iji nye ndị ọzọ nro karịa steroid nke anabolic.
Ma onye ọrụ ọ nwere mmetụta mmetụta na-adabere na ike nke SARM, dịka ọmụmaatụ, SARM siri ike karị nwere ike ịnwe nnukwu nsogbu nke mmetụta. Fọdụ n'ime mmetụta ndị a pụrụ ịgbanwe aha ha gụnyere:
Mbelata na ọnụ ọgụgụ spam na testosterone etoju
Mmanụ anụahụ na ntutu
Gbanwee na ọkwa cholesterol
Gbanwee na libido
Addiction addictionụ ọgwụ ọjọọ
Somefọdụ kọrọ mmetụta ndị a na - enweghị ike ịkọwapụta nke SARM ndị dị elu gụnyere:
Mụbara ọrịa cancer (na ịhọrọ SARM)
Ndi SARM kwesiri ya?
Ma SARM ọ bara uru ma ọ bụ na ọ dabere na okwu ikpe nke onye ọrụ. SARfọdụ SARM dị mma maka ịcha abụba, ndị ọzọ ka mma maka ịmalite. Maka ụfọdụ, SARM bara ezigbo uru na igbochi ahụ ike ma meziwanye ahụike ọkpụkpụ. Ihe niile dabere na ihe mgbaru ọsọ njedebe bụ maka iji SARM.
Kedu SARM M Kwesịrị Inara?
Ofdị SARM ị na-ewere yana nchịkọta ị na-ewere (ma ọ bụrụ na ọ bụla) na-adaberekarị n'otú ahụ mmadụ si emeghachi omume na SARM na ihe mgbaru ọsọ ha. Ndị a bụ ụdị SARM kachasị mma maka ebumnuche dị iche iche na-esonụ:
SARM kachasị mma maka ndị mbido
Ndị na-esonụ bụ SARM kachasị mma maka ndị mbido yana ụmụ nwanyị na-achọ ọgwụ dị ala:
Nwere ike ịchọta njikọ nke ndị a 'mbido' SARMs na nchịkọta ebe a.
SARM kachasị mma maka ịcha
Ọtụtụ ndị ọrụ nke SARM kwenyere na ha na-enye aka karịsịa maka igbubi n'ihi na ha na-enyere ahụ aka ịnọgide na-enwe ahụ ike na-enweghị mmụba mmiri. Nke a bụ SARM kachasị mma maka ịcha:
SARM kachasị mma maka Bulking
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime SARM kachasị mma maka ịmalite na uru uru:
SARM kachasị mma
E nwere ọtụtụ ụdị SARM nwere ike ịhọrọ site na. Lee ụfọdụ n'ime ihe ndị kacha mma:
Mbido tingcha tojupụtara
Mbido Akwara Stack
Etiti tingcha tojupụtara
Ọkpụkpụ akwara nke etiti
Advanced Shredding tojupụtara
Ọkpụkpụ akwara dị elu
Ihe oriri gị na SARM
Nsonaazụ ị nwetara na nchịkọta SARM ga-adị ukwuu karịa mgbe ejikọtara ya na nri kwesịrị ekwesị. Iwere SARM naanị agaghị enye ọdịdị ahụ ị na-achọ ma ọ bụrụ na ị naghị eri nri kwesịrị ekwesị ma ọ bụ na-emega ahụ.
Igodo nke SARM bụ ime ka protein dị na nri gị. Ndị SARM na-etinye ahụ gị n'ọnọdụ nke ọnọdụ anabolic, yabụ, ahụ gị ga-enwe ike ịbawanye njikọ protein. Dị ndụmọdụ a bụ ịba okpukpu abụọ gị na-eri nri ntụ ntụ.
Ndị SARM na-enwekarị mmetụta nke estrogen. Iji merie nke a, ọ dị mkpa itinyekwu akwụkwọ nri na nri gị, ọkachasị ndị na-alụ ọgụ na mmetụta nke estrogen dị ka ero. E nwekwara ihe oriri na ụdị nri ị kwesịrị izere kpamkpam, dịka:
Mechaa anụ ndị oke nitrate
Ighe / nri eghe
Nri esiri esi na ihe eji eme ya na mmanu hydrogenated
SARM maka ụmụ nwanyị
Womenmụ nwanyị na-achọ iji SARM maka ihe ndị yiri nke ahụ dị ka ụmụ nwoke: ịbawanye ike na ume, gbaa abụba, ma nweta ahụ ike. Ndị SARM ga-enyekwa ụmụ nwanyị ezigbo mmụba na ume ike.
Femụ nwanyị nwere ike iji SARM, agbanyeghị, ọ dị mkpa ịmara na ụmụ nwanyị na-enwekarị mmetụta karịa mmetụta karịa ụmụ nwoke. Acne, uto ntutu ọzọ, mgbanwe libido, mgbanwe ọnọdụ, na mmụba nke olu bụ ụfọdụ ihe ụmụ nwanyị nwere ike ịnweta, yabụ, ọ dị mkpa ịhọrọ nke ọma ndị SARM ga-ewere ma nyochaa mmetụta ndị ahụ nwetara. Ọ dịkwa oke mkpa ka ụmụ nwanyị rapara na usoro ọgwụgwọ mgbe ọ bụla ha gafere usoro SARM.
Womenmụ nwanyị na-ewere SARM nwekwara ike ịhụ nsonaazụ ngwa ngwa. Mmelite nwere ike ịmalite ime na obere izu 1-2. Ndị a bụ ụdị SARM akwadoro maka ụmụ nwanyị:
Ọgwụ SARM maka ụmụ nwanyị
Womenmụ nwanyị kwesịrị ị aụ ọgwụ dị ala karịa ndị ibe ha. Dosdị usoro ọgwụgwọ ga-adabere na nke a na-ewere SARM. Dịka ọmụmaatụ, na Ostarine, ụmụ nwoke ga-amalite site na 20 mg kwa ụbọchị ma nwee ike rụọ ọrụ ha ruo 30 mg. Otú ọ dị, maka ụmụ nwanyị, usoro ọgwụgwọ ga-adị ihe dị ka 10 mg ụbọchị ọ bụla ma mụbaa site na ya dabere na nsonaazụ ya.
Naanị cheta na a bịa na SARM, mmetụta na usoro onyonyo dị iche maka mmadụ niile, ọ bụghị naanị ụmụ nwanyị. Ọ dị mkpa ịmalite iji obere obere, lelee nsonaazụ, ma gbanwee ebe ahụ.
Kedu ihe kpatara SARM
SARM bụ ezigbo nhọrọ maka ụmụ nwanyị na-atụ anya ịbawanye ike na akwara ha ka ha na-enwe mmetụta mmetụta ọsọ ọsọ. Ndụmọdụ ndị ọzọ na steroid nwere ike ịdị nhịahụ na ahụ ma rụpụta ọbụna ọkwa dị elu nke mmetụta dị na ụmụ nwanyị. SARM na-enye ụmụ nwanyị nhọrọ ịmị ụda ha n'emeghị ka ọ dị elu. Ha na-eme oke ihe dị iche iji nwee mmetụta n'ahụ ma bụrụkwa nke dị nwayọọ. Na mgbakwunye, ụmụ nwanyị ekwesịghị ịnagide mmetụta ọjọọ na-adịghị mma nke anabolic steroid.
Ọgwụ Post-Cycle mgbe ị werechara SARM
Usoro ọgwụgwọ post-okirikiri (PCT) bụ obere oge ozugbo ọ gwụchara usoro SARM ebe onye ọrụ chọrọ iji nweta ọkwa ha hormone na ọkwa nkịtị site na njikọ ọgwụ, nri, na ogige ndị ọzọ. Chee echiche banyere usoro ọgwụgwọ na-aga n'ihu dị ka ụzọ isi mee ka ahụ dị ike.
Onweghi otu ogha n’usoro ogwugwo usoro. Dabere na onye ọ bụla, ụdị SARM ewere, na ogologo oge SARM, ọ ga-enwe ike ịme PCT maka ihe dị iche iche. Ihe niile dabere na ọrịa ahụ.
Ndị ọrụ kwesịrị ịhazi PCT ha tupu oge eruo, na-agakarị na njedebe nke usoro SARM iji hụ na mmiri ọgwụ hormone na-eme ka ọ kwụsie ike.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na n'ihi na SARM enweghị obere ihe ọ bụla na-enweghị mmetụta ọ nwere na ọ nwere ntakịrị mmetụta na-egbu oge na usoro ọgwụgwọ na-aga n'ihu adịghị mkpa dị ka ọ ga-adị na steroid ndị anabolic ọdịnala.
SARfọdụ SARM ndị na-esighi ike, nke a na - ewe obere oge, dị ka Andarine, nwere ike ọ gaghị achọ usoro ọgwụgwọ mgbe ọ bụla, mana ụdị SARM siri ike nke weghaara n'ime ọtụtụ ọnwa ga-achọkarị ọgwụgwọ post-okirikiri.
Ebee ka ịzụta SARM? N'ebe a na SARMs Store UK n'ezie
Dị ka ihe ọ bụla dị n'ahịa, ọ dị mkpa ịkọwa n'etiti SARM dị elu na SARM dị ala nke na-esite na isi iyi enyo. Karịsịa, ọ bụrụ na SARM a na-enye dị ọnụ ala karịa ngwaahịa ndị ọzọ achọtara n'ahịa mgbe ahụ ọ nwere ike ọ gaghị akwado ụkpụrụ kachasị mma na imepụta ihe. Ndị a bụ ụfọdụ ụdị nsogbu na SARM ndị anaghị emepụta nke ọma na nke atọ kwupụtara:
Na-agbakwunye toxins na kemịkal na-emerụ ahụ n'ime SARM
Dilise ndị SARM na ihe na-adịghị mma
Mislabeling maka uru ka ukwuu
Cha nkuku n'oge mmepụta iji chekwaa ụgwọ
Ọ dị mkpa ịlele na ngwaahịa SARM abụrụla nke atọ nyochara iji mara ma ọ bụ ngwaahịa dị mma.
Na SARMs Store UK, anyị na-ere SARM kachasị mma yana mgbakwunye nke dị mma, iwu, ma rụpụta nsonaazụ. A na-arụ SARM anyị na UK na ụkpụrụ kachasị mma ma jiri ihe eji eme ọgwụ. Nke a pụtara na ndị ọrụ nwere ike iji SARM na-eto eto ma ghara ida abụba.